Global Voices teny Malagasy · 22 Novambra 2017
Tantara tamin'ny 22 Novambra 2017
Angletera22 Novambra 2017
Ny "Alin'i Guy Fawkes" mankalaza isan-taona, ao anaty afo sy firavoravoana, ny fikasàna iray hanafika.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Novambra 2017
Miaina ao anatin'ny fanjakan'ny mpitandro filaminana...ary mbola loza hafa foronin'ireo jiolahimboton'ity fitondrana ity izany. Tsy hajain'ity fitondrana ity ny olona, ny olom-pireneny sy ireo mpitsoa-ponenana sasantsasany tsy afa-manoatra.
Manomeza Ho An'ny Global Voices—Ampio Izahay Hampifandray Izao Tontolo Izao
Mediam-bahoaka22 Novambra 2017
Ny asanay nandritra ny 12 taona lasa dia porofo fa afaka manova ny fahafantaran'ny olona ny tontolo ny fifandraisan'ny samy olona avy amin'ny ankolafy samihafa.. Tohano amin'ny fanolorana fanomezana izahay, anio!
Azia Afovoany sy Kaokazy22 Novambra 2017